Site Progress | Outboard Boat Motor Repair
Fanehoan-kevitra momba ity toerana sy ny fandrosoana ataoko, ary koa ny bibikely no mila manamboatra.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 06 / 05 / 2017 - 20: 12
New Videos Page ary Comment Pages
Vao avy nanampy vaovao Videos Pejy ary koa ny maro Comment Categories....... Tom
napetraky ttravis tamin'ny Sun, 11 / 05 / 2017 - 13: 32
Fanavaozana fotsiny. Na dia mety tsy dia ho be loatra aza ny tarehiny, dia sahirana aho niditra tamin'ny fampidirana ireo singa ao anaty tranokalan'ny tranonkala. Tsy manana an'ity fampahalalana ity amin'ny endrika elektronika aho, noho izany dia mila miditra amin'ny fomba taloha ihany aho.
Amin'izao fotoana izao, raha mijery motera alohan'ny 1980 ianao dia mahita lisitry ny faritra ho an'io motera io, raha misy. Tamin'ity fahavaratra lasa teo ity dia niditra tao amin'ny motera Evinrude / Johnson / OMC / BRP rehetra aho nanomboka tamin'ny 1980 ka hatramin'izao. Asa goavana ity, saingy vitako izany. Ankehitriny dia miditra amin'ny faritra rehetra ao amin'ny Katalaogy Sierra aho ary hanondro azy ireo amin'ireo motera iarahany miasa, miaraka amin'ireo rohy Amazon. Amin'izao fotoana izao dia miditra amin'ny peratra piston aho ary manana pejy 100 eo ho eo! Mino aho fa mendrika ny ezaka ny vokany.
Manoratra programa manokana aho mba hanampiana amin'ny fanondroana, saingy aloha aho mila mahazo ny tapany rehetra.
Nasiako rohy mankany amin'ny lisitry ny 2018 Sierra mba hahafahan'ny olona mijery ny ampahany tsy mbola nampidiriko.
Manana olana hafa momba ny tranonkala tiako hodiovina aho, fa amin'izao fotoana izao, te-hahazo ny antontan-taratasy rehetra napetraka aho.
napetraky ttravis tamin'ny Sun, 09 / 30 / 2018 - 12: 14
More Parts and Motors.
Efa eo am-pamaranana ny fampifanarahana ny lisitry ny faritra lava sy ny motera miaraka aminy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, miditra ao amin'ny latabatra fisoratana anarana aho ka raha misy misintona ny moto dia haseho ny lisitr'ireo faritra mifanentana amin'ilay motera. Tetikasa lehibe kokoa noho ny nieritreretako azy io, saingy ao amin'ny pejy fidirana vitsivitsy farany aho.
Na dia nanandrana mafy aza aho mba ho marimarina toy ny posible, dia azo antoka fa misy lesoka sasany. Raha mahita ampahany fantatrao ianao fa tsy mandeha amin'ny moto anao na zavatra mila ahitsy dia mba ampahafantaro ahy amin'ny alàlan'ny fandefasana hevitra eto.
Nianarako zavatra betsaka tamin'ity dingana ity, indrindra ireo izay tsy misy intsony ho an'ny motera tranainy sasany. Manantena aho fa hiverina hanao fikarohana mba hahitako raha mahita vahaolana tsy dia miharihary aho. Ny fampidirana na tolo-kevitra rehetra dia raisina ary hampiasaina eto hanasoavana ny hafa.
Ankehitriny manana an'ity tranonkala ity amin'ny fiteny maro aho, dia gaga aho amin'ny isan'ny mpitsidika ananantsika manodidina sy ny fiteny ampiasain'izy ireo. Miarahaba ny rehetra aho satria toa samy manana fitiavana iraisana amin'ireo motera iasantsika isika rehetra.
Manana hevitra bebe kokoa momba ny fanatsarana ity tranokala ity aho ary hanao ezaka be ao anatin'izay volana vitsivitsy ho avy. Zavatra telo tiako ampiana ao amin'ilay tranokala ny props, plugs plugs ary boky torolàlana momba ny serivisy. Ireto no zavatra tadiavin'ny olona maro. Araho hatrany ary jereo hatrany.
napetraky ttravis ny Thu, 10 / 25 / 2018 - 17: 33
Hividy ny ampahany amin'ny Ebay
Manampy safidy ho an'ny ampahany tsirairay aho mba hividy io ampahany amin'ny Ebay io.
Nandinika ny lisitry ny ampahany manontolo aho ary nanampy fangatahana izay hahitana valiny. Indraindray aho dia tsy maintsy nampiasa teny fanalahidy sy / na isa maromaro mba hahazoana valiny tsara.
Nandritra io dingana io dia naveriko ihany koa ny fangatahan'ny Amazon mba hahafahan'izy ireo mandray ny mpisera ao amin'ny tranokalan'i Amazon ho an'ny fireneny.
Rehefa miasa miaraka amin'ny Amazon sy eBay aho, mijery ireo faritra mitovy amin'ny tsirairay, indraindray dia mahita fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa aho. Indraindray Amazon dia manana ny vidiny tsara indrindra, indraindray ny eBay no manana ny vidiny tsara indrindra. Na izany na tsy izany, dia azonao atao ny mahita ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny fijerena azy roa.
Ny ankamaroan'ny ampahany amin'ny eBay dia tsy ao anaty endrika lavanty. Ny vidinao dia aseho amin'ny vidiny "Vidio izao", ary tsy misy fomba fanaovana lavanty mihitsy.
Eo am-pijerena ireo faritra rehetra ireo amin'ny eBay dia hitako fa ireo olona mivarotra ireo dia mitovy amin'ny olona hitanao ao amin'ny departementan'ny faritra amin'ny mpivarotra serivisy sy fivarotana an-dranomasina. Mitady fomba vaovao hivarotana ny vokariny amin'ny Internet fotsiny izy ireo. Toa manana vintana tsara kokoa ihany koa aho mahita faritra tsy dia fahita sy sarotra tadiavina amin'ny eBay.
Ny zavatra iray nianarako dia ilay teny hoe "NOS" izay midika hoe "New Old Stock" izay midika fa amin'ny toe-javatra vaovao izy io saingy nipetraka teo amin'ny talantalana nandritra ny taona maro. Izany dia midika ho fifanarahana tsara ho anao.
Eo am-piandrasana ny mialoha dia te-hanome safidin-tsivily ho an'ny moto tsirairay aho, ary koa ny boky torolàlana ho an'ny serivisy ary ny plug-pire. Raha vantany vao azoko ireo rehetra ireo dia te hiverina hiverina amin'ny alàlan'ny motera aho ary hametraka amin'ny antsipirihany momba ny motera tsirairay ary angamba hevitra fanampiny.
Antenaina fa amin'ity herintaona ity, dia hanamboatra ity tranonkala ity aho, izay Johnson / Evinrude / OMC / BRP ary manomboka amin'ny Mercury / Yamaha sy ireo marika hafa amin'ny motera.
Toy ny mahazatra, ankasitrahako ny fanehoan-kevitrao sy ny fanehoanao hevitra.
napetraky ttravis tamin'ny Wed, 06 / 12 / 2019 - 16: 44
Miasa amina tranokala.
Fotoana fohy taorian'ny tsy nilazako na inona na inona momba ny fanehoan-kevitra momba ny fivoaran'ny tranonkala, saingy tsy midika izany fa tsy sahirana aho. Vao tsy ela akory izay no nanisy tsipika spark ho an'ny marika maromaro ankoatran'i Johnson / Evinrude. Spark plugs ho an'ny marika hafa no ho famantarana voalohany anao fa akaiky tanteraka an'i Johnson / Evinrude izahay ary vonona ny hiroso amin'ny Mercury, Yamaha, Honda, ary angamba maro hafa.
Amin'izao fotoana izao dia mivonona ny hanampy propeller aho. Kivy foana aho rehefa nividy «propeller» ho an'ny motera satria tsy nanana fomba tsara hahalalana hoe misy inona ary hiasa amin'ny moto. Miezaka ny manala ny siansa voodoo aho ary manao izay hividianana mpisolo toerana ho tsotra kokoa toa ny nataoko tamin'ny plug-in.
Efa nanao ny sasany ambadiky ny fivoaran'ny sehatra aho. Ny tena manamarika indrindra dia ny fisian'ny fiarovana SSL, noho izany ny adiresy amin'ireo pejy dia manomboka amin'ny https: // ..... Raha tsy misy fiarovana SSL, dia hahazo hafatra ny olona milaza hoe "Tsy azo antoka ity tranonkala ity," izay mety hahakivy. Tokony hisy padlock maitso hiseho ao amin'ny bara adiresin'ny browser-nao. Hatramin'ny nanaovanao izany dia nitombo ny fifamoivoizana an-tranonkala, indrindra ny fifamoivoizana iraisam-pirenena. Ity sary eto ambany ity dia mampiseho ny toerana nitsidihan'ny olona ity tranonkala ity tamin'ny Mey of 2019. Mieritreritra aho fa mahazo fandrakofana manerantany isika afa-tsy Afrika afovoany. Ny olona manerana an'izao tontolo izao dia maniry ny manamboatra ny moterany ivelany. Reko amin'ireo olona mankasitraka ilay tranonkala voadika amin'ny tenin-tranony.
Misaotra ny fanohananao.